Mai Chibwe VekwaZimuto: Ndiani akakudzidzisa izvi?
Varipo varume vaunongozoti hako wega “apa ndakaroorana nefuza chaiyo asi chingoregai ndigare hangu.” Unenge wazvionera wega kuti njere dzake ishomanana.Ndakambogara dare reumwe wefuza dzakadai, arova mukadzi vapedza rhoji. Ndobvunza kuti ko mukadzi ange aita sei. Kwahi akandiitira zvechihure saka ange ambohura.Ndobvunzisisa kuti zvaanoti zvechihure ndezvipi izvi.Ndokuzorondedzegwa nomukadzi wacho kuti mukadzi ange afongorera murume, chiri chinhu chavange vasina kumboita pamwedzi yese misère yavange vakaroorana.
Ini ndakatora murume uyu, makore ake 27, ndokuinda naye muimba yavo yokugara, ndokubvunza kuti
Mukadzi wako ane makore manganic?Kwahi 23.
Ko chitubu chake agara nacho makore manganic? Kwahi 23
Wakatanga kuvata naye riini?Kwahi mwedzi misère yapfuura.
Ndiwe wakamudzidzisa kuvhura makumbo ake here kana kuti aitoziva kuti pakuvatana makumbo anovhugwa murume oinda pakati?Kwahi aiziva.
Saka wakaroora hure hakozve nokuti pane murume ange atomudzidzisa izvi?Kwahi bodo.
Saka kupinzwa nokumberi hakudi munhu kuti amudzidzise asi kupinzwa nokumashure kunoda munhurume kuti amudzidzise zvinofamba sei izvozvo? Kufunga kwako iye haazivi kuti chitubu chake chaagara nacho makore 23 chingapindwa zvese nemberi neshure zvokuti anotoda munhurume asina chitubu kuti amudzidzise kuti kunofongogwa sei? Aaah Bodo, ndakangokanganisawo kufunga.
Ndikati chikumbira regerero asi usati wadaro, dzidza chinhu chokuti mukadzi wako anoda kupinzwa nokumashure saka iwe basa rako nderokuterera mukadzi kwete kurova mukadzi ari kukuitira zvawakamuroorera.
Varume ipaiwo vakadzi venyu freedom yokuti kana vari pamusina hembhe mese vahwe kuti vane freedom yokuita zvavanoda.Ndakahwa umwe murume Lawyer mu UK achitotaura kuti ini mukadzi kana akada zvokundikwira yatova Challenge yokuti iye ndiye ave murume. Ini nokusada kunyarara ndakati “Ko ini zvandaitofunga kuti kuhi murume hunge une zvinhu zvechirume, kwete kuti ari pamusoro muri pamubhedha ndiani” Ndikahwa oti kuvatereri vake “Mukadzi haandikwiri.”
Shuwa shuwa mungabva maisa politics pamubhedha here?Psychology yevanhu vakadai inobva papi shuwa kusvika munhu ofunga zvese izvi obva azvigwinyira kudaro. Ndivo vakadzi vanoti akauya kumba kwako anongopedza 3 hours achingodemba nhamo yake, asi mari iripo, mota dziripo, imba yakazara zvinhu, asi mufaro haana. Mufaro pamusha unobva pakuhwisisana mafungire enyu.
Murume itawo sewasangana namai chimwana muDance Hall.Rezva mukadzi, bvunza mukadzi, ipaa mukadzi freedom yokutaira nokukuudza zvaanoda.Tora nguva kuterera nokuita.Ita sokuti watanga kuona zamu nhasi. Wongorora muviri wemukadzi wako.
Isu takagadzirigwa kusevha umwe munhu.Ndikawana murume anofarira kusevhiwa ndinoitawo manyawi murume achikudza zvaitwa.Udza mukadzi wako kuti anonaka uye chikapa chake chinodadisa.Uchaona mangwana owedzera aziva kuti baba Mwana ndozvavanoda.Kana achida kupima chombo rega apime.Ndiyo shamwari yake iyoyo.Iwe unotamba nemaTOY akawanda, mazamu, matinji, bhinzi (kana uchiziva pairi) isu tongori nechombo chete, saka rega atambe nacho aite zvaanoda.
Pane zvinhu zvisingadi kudzidziswa munhu ane njere.Mapinzigwe andinoda musi iwoyo hazvirevi kuti ndomirira murume andiratidze kusiyanasiyana kwazvo.Kana mukadzi angovhura mavhurire aada iye iwe watyei kungopinza unyerere wotenda kuti wazviwanirapo, nyaya yopera yakadaro.
Mahure anongorhojewawo sezvatinongoitawo isu. Hapana siyano kuzhe kwekuti imi varume matidzvanyirira kusvika tave marhobhotsi pamubhedha zvokuti imi mava kutofunga kuti vakadzi havazivi zvokuita kana vachida kupinzwa chombo, murume ndiye anotanga adzidzisa mukadzi kuti anofongora sei nokuti mukadzi haazivi kuti chitubu chake chiripi. Haavhuri makumbo asina kudzidziswa nomurume, haabati chombo asina kudzidziswa nomurume. IN SHORT varume munotoona sokuti tiri vanhu vakapusapusa izvo ndimi mafuza chaiwo ekupedzisira. Ungatovhura muromo wako kubvunza munhu kuti wakazvidzidziswa nani uchibvunza munhu akapasa Grade 7 here? Kutotambisa nguva yerhoji uchibvunza zvakadaro. Chero mavhurire aaita iwayo iwe basa rako kupinza chombo chete muite zvinonaka, kwete kuti waona pavhugwa iwe dzvamukei wotanga kuchemachema kuti akadzidzisa mukadzi wangu kuti panhu pake panovhurika ndiani?
Chitubu ndechangu ndakazvagwa ndinacho. Matinji ndakapedza makore ndichidhonza aripo pamuromo wechitubu. Ndakambomirira here kudzidziswa nomurume, nhasi wozondibvunza sichupeti kweshoni yokuti WAKADZIDZISWA NANI.
Chese chese chinoitwa nehure mukadzi wemumba anochikwanisa. Chinoitisa kuti asaita ingari yokuti haana FREEDOM of EXPRESSION nokuda kwemurume wake aanoziva kuti haadi kumupa freedom. Ukachata nomunhu zvoreva kuti chese chinokufadza anofanira kuchiziva. Zvokusvoderana bodo. Udza munhu wako kuti agozivavo zvokuita zvaunoda.
Posted by Mai E Chibwe at 12:10